Crito3| Zizawa's refuge
Posted by zizawa ⋅ 08/10/2010 ⋅ Leaveacomment
Socrates: ‘ဒါဖြင့်ရင် ပညာသင်ယူနေတဲ့ လူတယောက် (အကြံဥာဏ်တခုခု လိုအပ်နေသူ တယောက်ကို ဆိုလိုပုံရပါတယ်။aman in training လို့ရေးထားတယ်။) ဟာ လူတကာရဲ့  ချီးမွမ်း၊ ကဲ့ရဲ့ ထင်မြင်ချက်တွေကို လိုက်နာသင့်လား၊ ဒါမှမဟုတ် ပညာပေးနေသူ (a doctor oratrainer) ရဲ့  ထင်မြင်ယူဆချက်ကိုပဲ လိုက်နာသင့်လား၊ ဒီကိစ္စကျတော့ရော ဘယ်လိုပြောမလဲ။
Crito: ‘ပညာပေးနေသူစကားပဲ လိုက်နာသင့်တာပေါ့။’
Socrates: ‘ဒီလိုဆို သူဟာ (ပညာသင်ယူနေသူဟာ) အဲ့ဒိပညာပေးနေသူ ဝေဖန်မှာကို စိုးရွံ့ ၊ ချီးမွမ်းတာကိုတော့ ကြိုဆိုသင့်တယ်လို့ ပြောမလား။’ (ယောမင်းကြီးနဲ့ မြင်းထိန်း ငတာကို မျက်စိထဲမြင်မိတယ်။)
Socrates: ‘ဒါဖြင့်ရင် ပညာရှာနေတဲ့သူက တခြားလူတွေထက် တကယ်တတ်ကျွမ်းပုံရတဲ့လူ၊ တကယ်သင်ကြားပေးနိုင်ပုံရှိတဲ့လူက ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်း စားသောက်၊ နေထိုင်၊ လေ့လာသင်အံသင့်တာပေါ့။’
Socrates: ‘ကောင်းပြီ။ ဒီလူ (တကယ်သင်ကြားပေးနိုင်သူ) တယောက်ရဲ့ စကားကို နားမထောင်ဘဲ သူ့ရဲ့ ထင်မြင်ယူဆချက်တွေ၊ ချီးမွမ်းပြောဆိုမှုတွေကို ပယ်ပြီး ဘာမှမတတ်တဲ့လူအများရဲ့ ထင်မြင်ယူဆချက်တွေ၊ ချီးမွမ်းပြောဆိုမှုတွေကို ယူနေရင် ဒီလူ ဒုက္ခမရောက်ဖူးလား။’
Crito: ‘မရောက်ဘဲ ဘယ်နေလိမ့်မလဲ။’
Socrates: ‘အကြံပေးတာကို မလိုက်နာတဲ့လူ (disobedient person) က ဘယ်လိုထိခိုက်မှုမျိုးရောက်မလဲ၊ ဘယ်နေရာမှာ သွားထိခိုက်မလဲ။ (ဒီနေရာမှာ Socrates က closed question နေရာကနေ မေးပုံ ပြောင်းသွားပုံရတယ်။ ဒီမေးခွန်းကို Crito ပြန်ဖြေတာကိုကြည့်ပြီး အစောပိုင်းက doctor, trainer ဆိုတာ ကနေ့ခေတ် gym တွေမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ personal body trainer တွေကို ပြောချင်ပုံရတယ်လို့ ယူဆမိတယ်။)
Crito: ‘သူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ ထိခိုက်မှာ ရှင်းနေတာပဲ။ ဘာလို့ဆို (ကိုယ်ကာယ လေ့ကျင့်မှုလုပ်တဲ့နေရာမှာ) ညွှန်တဲ့အတိုင်း မလုပ်ရင် ခန္ဓာကိုယ်ကို ထိခိုက်မှာပေါ့။’
Socrates: ‘ဒါပေါ့။ ဒီတော့ ဘယ်ကိစ္စမှာမဆို၊ ဘယ်ကိစ္စဆိုတာထက်ကွာ ဒို့အခု ဆွေးနွေးနေတဲ့ တရားတာ၊ မတရားတာ၊ ကောင်းတာ၊ ဆိုးတာ၊ ရှက်ဖွယ်ကောင်းတာ ဟုတ်လား ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေမှာရော လူအများ (the many) ရဲ့ ထင်မြင်ယူဆချက်အတိုင်း လိုက်လုပ်ပြီး သူတို့ဝေဖန်ကဲ့ရဲ့ မှာကို ကြောက်နေရမလား၊ ဒါမှမဟုတ် ဒီလိုကိစ္စရပ်တွေမှာ လမ်းညွှန်နိုင်သူရှိရင် အဲဒိလူတယောက်ထဲရဲ့ ညွှန်ကြားတာကိုပဲ နားထောင်သင့်တယ်လို့ ပြောရမှာပေါ့။ မဟုတ်ဖူးလား။’
Crito: ‘အမှန်ပဲပေါ့ Socrates။’
Socrates: ‘ဒီတော့ ကိုယ်ခန္ဓာအကြောင်း သိတဲ့လူရဲ့ ထင်မြင်ယူဆချက်ကို နားမထောင်တဲ့ အတွက် နေထိုင်ကောင်းလို့ တိုးတက်ကောင်းမွန်နေတဲ့ အပိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊ နေထိုင်မကောင်းလို့ အလုပ်မလုပ်တော့တဲ့ အပိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီအပိုင်းတွေကို ငါတို့ဖျက်ဆီးပစ်ရရင် ဘ၀ဟာ နေပျော်သေးရဲ့ လား။ ပြောချင်တာ ကောင်းကောင်းအလုပ်မလုပ်တော့တဲ့အပိုင်းဆိုတာ ရုပ်ခန္ဓာကိုပြောတာကွာ။ အဲ့သလို မဟုတ်ဖူးလား။’
Socrates: ‘ဒီတော့ ပျက်ယွင်းနေတဲ့ ခြုံခြုံးကျနေတဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ နေရတဲ့ ဘ၀က နေပျော်ရဲ့ လား။’
Socrates: ‘ဒါဖြင့်ရင် ဒို့ဘ၀မှာကောကွာ မတရားမှုက နာကျင်ထိခိုက်စေတဲ့ အပိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တရားမှုက အကျိုးများစေတဲ့ အပိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီအပိုင်းတွေကို ငါတို့ ဖျက်ဆီးပစ်ရရင် ဘ၀ဟာ နေပျော်သေးရဲ့ လား။ ဒါမှမဟုတ် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခြုံးခြုံးကျ ပျက်ယွင်းနေတဲ့ဘ၀နဲ့ ခုတရားမှု၊ မတရားမှုကြောင့် အကျိုးများ၊ နာကျင်ထိခိုက်တဲ့ ဘ၀နှစ်ခုကို နှိုင်းယှဉ်တာ အရေးမကြီးဘူး ပြောမလား။’ (ဒီနေရာမှာ တခုလောက် ၀င်ဖြည့်ချင်တာက Socrates ဟာ ရုပ်နဲ့ ရုပ်မဟုတ်တဲ့အရာ (ရူပနဲ့ အရူပလို့ပြောရမလား) နှစ်ခုကို နှိုင်းယှဉ်တာကို သတိပြုချင်စရာကောင်းတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်နိုင်မှုဟာ well.. ခန္ဓာကိုယ်နဲ့သာ ဆိုင်ပြီး တရားမှုကို သူက virtue အဖြစ် သဘောထားပြီး ဒါဟာ ရုပ်နဲ့မဆိုင်ဘူး၊ လူ့ရဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့သာ ဆိုင်တယ်လို့ ဆိုလိုချင်တာကို သူ့ရဲ့တခြားအရေးအသားတွေအရ နားလည်မိတယ်။ နားလည်မှုလွဲတာ ဖြစ်ချင်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။It’s just my own interpretation!!)
Crito: ‘အရေးမကြီးဘူး ပြောလို့ ဘယ်ရမလဲ။’
Socrates: ‘ပိုပြီးတန်ဖိုးရှိတယ်ပေါ့၊ (တွေ့လား justice တို့လို virtue တွေဟာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သန်စွမ်းမှုထက် ပိုတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ ပုဂ္ဂိုလ်က ယူဆချင်တာ နည်းနည်း ပိုရှင်းလာတယ်။ Might is right ဆိုတာကို အဖိုးကြီးက လုံးဝလက်မခံဘူး။ ဒီအယူအဆကို လက်ခံသူတွေကို သူတချိန်လုံး နှိပ်ကွပ်လာခဲ့တာ။ သူနဲ့ Machiavelli သာ တစားပွဲထဲထိုင်ပြီး ခုလိုအငြင်းအခုံလုပ်ရင် ကျွန်တော်ထင်တယ် Socrates တချိန်ချိန်မှာ ထအထိုးခံရမလားမသိဘူး။:D)
Socrates: ‘ဒါဖြင့်ရင် အများက (the many ကိုခုကစပြီး လူအများအစား အများလို့ပဲ သုံးတော့မယ်။) ဒို့ကိုပြောတာကို သိပ်အလေးပေးစရာမလိုဘဲ တရားတာ၊ မတရားတာကို သိတဲ့လူ၊ နောက်ဆုံးကွာ အမှန်တရားကိုယ်နှိုက်ကိုပဲ (the truth in itself) အလေးပေးရမှာပေါ့။ ဒီတော့ Crito ရေ တရားတာ၊ မြင့်မြတ်တာ၊ ကောင်းမွန်တာတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အရာတွေမှာ အများရဲ့ ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကို လိုက်နာရမယ်ဆိုပြီး အစပိုင်းက မင်းပြောခဲ့တာ မှားနေတာပေါ့။ ဒါနဲ့တောင် အများက ဒို့ကို သေဒဏ်ပေးနိုင်သေးတယ်လို့ တချို့ ကလည်း ပြောချင်ပြောကြမှာပေါ့။’ (သူပြောချင်တာက တယောက်က အများထက် အမှန်တရား၊ တရားမှု၊ မတရားမှုတွေကို သိနေလျက်နဲ့တောင် အများက တယောက်ကို ဒါမှမဟုတ် အနည်းစုကို သေဒဏ်ပေးနိုင်သေးတာပေါ့လို့ ပြောချင်တာပေါ့၊ ဒီစာပိုဒ်ဟာ အရေးကြီးတယ်။ ပြောမယ်ဆို အရမ်းအရေးကြီးတယ်။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ ခုပြောခဲ့သလောက်မှာ Socrates ဟာ အများ the many နဲ့ တယောက် the one ဒါမှမဟုတ် the few ကို သိသိသာသာ ခွဲခြားထားပြီး ဘာမှမသိတဲ့ အများရဲ့  ထင်မြင်ယူဆချက်ထက် တကယ်သိတဲ့ တယောက် ဒါမှမဟုတ် အနည်းစုရဲ့  ထင်မြင်ယူဆချက်ကို လိုက်နာသင့်တယ်ဆိုတာကို အထင်အရှားတွေ့ရတယ်။ အဲဒိအတွက်ကြောင့် သူ့ကို anti-democratic ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ interpretation မျိုးရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့အထင်မှာ Socrates ဟာ ဒီထက်ပိုပြီး complicated ဖြစ်တယ်။ သူဟာ ပြောခဲ့သလို ဘာမှမသိတဲ့ အများရဲ့ ထင်မြင်ယူဆချက်ကို နားမထောင်သင့်ဘူးလို့ ပြောတယ်။ တချိန်ထဲမှာ အများရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လိုက်နာရမယ်ဆိုတာကို သေဒဏ်ကနေ ထွက်မပြေးဘဲ ပြခဲ့တယ်။ လူဟာ ကိုယ့်တဦးချင်းအမြင် ဘယ်သို့ရှိရှိ society ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို လိုက်နာရမယ်။ ဘာ့ကြောင့်လိုက်နာသင့်လဲဆိုတာကို သူက နောက်ပိုင်းမှာ ထပ်ရှင်းတယ်။ စာဖတ်ပရိသတ်များ အဲဒိထိ ဆက်ဖတ်ဖြစ်မယ်လို့လည်း မျှော်လင့်ပါတယ်။ နောက်တခါ Socrates က ဖီလော်ဆော်ဖာဆိုတာ ကိုယ့်အသက်သေမှာ ကြောက်လို့ ကိုယ်ယုံကြည်ချက်ကို စွန့်လွှတ်တာကို သူကရှုံ့ ချတယ်။ ပြောခဲ့သလိုပဲ။ Flesh may be weak, but one shouldn’t makeaprinciple out of that. ငါးကျပ်ရရ တဆယ်ရရ ရသလောက် space လေးကို ၀င်တိုးကြည့်နေတဲ့ ဆင်()ခွေးမျှော် ခေတ်သစ် သူတောင်းစားတွေနဲ့ ကွာပ။ Face-book က သူငယ်ချင်းတယောက် အပြောကို ကိုးကားပါသည်။) ဒီအချက်တွေကို ယူပြီးစဉ်းစားကြည့်ရင် Socrates ရဲ့ position ကို မှန်းကြည့်လို့ရမယ်ထင်ပါတယ်။
Ok. I think it’sagood idea to pause here and do some stock-taking of what Socrates said so far, before we continue to the main section of this work. We can see Socrates was trying to refute Crito’s claim that they must pay attention to the opinion of ‘the many’ (44 d). And the structure of his arguments refuting Crito’s claim seems to be this: (Important words here I think are ‘the many’ and ‘every’.)
One shouldn’t value every human opinion which Crito affirmed. (47 a)
From 1, it follows that we should value only some opinions and that is the good opinion. (That one ought to heed the good opinion is obvious and prescriptive, isn’t it?)
Mathematicians know mathematics more thanageographer or (any non-mathematicians) for that matter. (This sounds analytic if we strictly assume that mathematicians are those who practice, not just know, the art of calculation and reasoning concerning numbers, right?)
Therefore, from 3,alearner of Mathematics should seek advice about mathematics from mathematicians and not from geographers.
If she should do otherwise, harm would result. (Again, let’s take the word ‘harm’ to as broadasense as possible. Can we say someone who has wasted his/her life under the supervision of incompetent tutors has been harmed? Come on let’s say we can for the sake of the argument.)
Harmful life is not worth living. (Debatable. Or should we say harmful living is not as worthy as harmless living.)
Similarly, in matters concerning justice, noble good, one should listen to the one who can instruct competently in these matters.
Therefore,atrainer inaparticular line of inquiry, in order to avoid harm befalling upon him, should (should here is not not normative should, butakind of advice, for instance, all things considered, one ‘should’ do this or that etc..) listen to THE ONE who can instruct him competently in the relevant areas and not THE MANY who knows next to nothing about them.
Socrates က The One ဆိုတာ ဘယ်သူလို့ တိတိကျကျမပြောဘူး။ ဒါပေမယ့် ပြောခဲ့တဲ့ justice တို့၊ goodness တို့ကို ဆင်ခြင်စဉ်းစားတာဟာ philosopher တွေရဲ့ အလုပ်လို့ သူ့တပည့် Plato က ပြောတယ်။ နောက်ပြီး တတ်ကျွမ်းစရာ ပညာရပ်တွေထဲမှာ (စစ်ပညာအတတ်၊ လေးပစ်မြှားပစ်အတတ်၊ ဆေးကုအတတ်) အမှန်ကို ညွှန်ကြားနိုင်တဲ့ အတတ်ဟာ အရေးကြီးဆုံးပဲ။ ဒီအတတ်ဟာ ဖီလော်ဆော်ဖာတွေနဲ့သာ ဆိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့ လမ်းညွှန်တာကိုပဲ သာမန်လူတွေက နာခံသင့်တယ်လို့ Plato ကပြောတယ်။ ဒါဟာ Socrates ရဲ့ နောင်လာနောင်သားတွေပေါ် ထားခဲ့တဲ့ influence တွေလို့ပြောမလား။ Plato တင်မကဘူး။ Aristotle ပေါ်မှာလည်း အလားတူ သက်ရောက်မှုတွေရှိတာ တွေ့ရတယ်။ အထူးသဖြင့် brain and brawn ယှဉ်လိုက်တဲ့အခါမှာ brain ကို ဦးစားပေးသင့်တယ်ဆိုတဲ့ အမြင်မျိုးတွေဟာ ကနေ့ချိန်ထိ ဆက်ကျန်နေသေးတာပဲ။
« Crito 2
Crito4»